‘न्यू इयर’ मनाउन बोलाएर युवतीमाथि होटलमै बलात्कार, घटनामा सीता एयरका स्टेशन म्यानेजर मुछिए !
ARCHIVE » ‘न्यू इयर’ मनाउन बोलाएर युवतीमाथि होटलमै बलात्कार, घटनामा सीता एयरका स्टेशन म्यानेजर मुछिए !
नेपालगञ्ज - अंग्रजी नयाँ बर्षकै दिन नेपालगञ्जमा दुखद घटना घटेको छ । ‘न्यु इयर’ मनाउनको लागि साथीसँग होटलमा पुगेकी एक युवतीमाथि बलात्कार भएको छ ।
सुर्खेतरोडस्थित होटल सिग्नेटमा आइतबार 'न्यु इयर' पार्टीको आयोजना गरिएको थियो । घटनामा सीता एयर नेपालगञ्जका स्टेशन म्यानेजर मनोज गिरी भारती पनि मुछिएका छन् । सुर्खेत घर भइलामो समयदेखि होटल सिग्नेटमा बस्दै आएका मनोजले आइतबार सुर्खेतका ४३ वर्षीय निरज गुरुङका साथै केही महिला साथीहरुलाई त्यहि होटलमै बोलाए ।